We Fight We Win. -- " More than Media ": အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ခွပ်ဒေါင်းနှင့်နိုင်ငံရေးပါတီများ
၁။ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွင် အင်န်အယ်လ်ဒီသည် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး(ဟောင်း) တင်အေးထံ သွားရောက်၍ ပါတီမှတ်ပုံတင်ကိစ္စကိုသော၎င်း၊ ဒေါ်စု ကော့မှူးမြို့ နယ်မှဖြစ်ဖြစ်၊ကော့ဘိန်း၊ကော့ကရိတ်မြို့ နယ်တို့ မှဖြစ်ဖြစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲဝင်မည့်ကိစ္စကိုသော၎င်း ကျနော်အနေနှင့် စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိ၍ မည်သည့် ထင်မြင်ချက် မှလည်း ထင်ကြေးပေးမည်မဟုတ်ဖြစ်သည်။
၂။ သို့ သော်လည်း အင်န်အယ်လ်ဒီအလံနှင့်ပက်သက်ပြီး ထင်မြင်ချက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ယခုကိစ္စသည် ၂၆၊၉၊၁၉၈၈ခုနှစ် န၀တ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးဘဌေး ထံ အင်န်အယ်လ်ဒီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှစတင်၍ အခြေခံခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ် အတွင်းတွင် ကျောင်းသားလူငယ်အဖွဲ့ များသည် အစဉ်အလာကြီးမြတ်သော တိုက်ပွဲဝင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအလံတော်ကို ပါတီတရပ်၏ အလံအဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ကြောင်း အင်န်အယ်လ်ဒီ ကို တင်ပြခဲ့သည်။
၃။ အင်န်အယ်လ်ဒီမှလည်း ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးအား ကျောင်းသားထု မှဦးဆောင်မှုအပေါ် ဂုဏ်ပြုခြင်းအနေဖြင့် သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ၁၉၈၈-၈၉ခုနှစ်ကာလများတွင် န၀တထံ မှတ်ပုံတင်ခဲ့သော ကျောင်းသား၊လူငယ်ပါတီများဖြစ်သည့် လူဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ကျောင်းသားများအရေးတော်ပုံပါတီ၊ ဒီမိုကရက်တစ်တက္က
သိုလ်ဘွဲ့ ရ ကျောင်းသားများအဖွဲ့ ၊အမြဲစိမ်းလူငယ်များအဖွဲ့ ၊အားမာန်သစ်ကျောင်းသားလူငယ် များအစည်းအရုံးတို့အလံသည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ကိုသုံးစွဲခြင်းမရှိသည် ကိုတွေ့ ရသည်။
၄။ မျက်မှောက်အချိန်ကာလသည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂလည်း ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင် နိုင်ခွင့်မရှိသေးသည့်သဖြင့် မည်သည့် ပါတီမျှ သမဂ္ဂခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ကို သုံးစွဲကာ အသုံးပြုသင့်၊မပြုသင့်ကို တရားဝင်ကြေညာနိုင်ခွင့် မရှိဖြစ်နေသည်။ သို့ သော်လည်း အင်န်အယ်လ်ဒီ သည် ပါတီအလံအဖြစ်သာမက၊ ရွေးကောက်ပွဲအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ပါ သမဂ္ဂခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ကို သုံးစွဲနေသဖြင့် မသင့်လျှော်ကြောင်း ကန့် ကွက်လိုက်ပါသည်။
၅။ ယခုလက်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဘေးနားတွင် ၀န်းရံနေသူအများစုသည် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုအေးလွင်၏ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ)မှ ပါတီအလံဖြစ် သမဂ္ဂခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ကို အသုံးမချသင့်ကြောင်း ကန့် ကွက် ခဲ့သည်။(မှတ်ချက်။ ။ ကိုအေးလွင် ကို လုံးဝမထောက်ခံပါ)
၆။ ပါတီတရပ်၏ အလံကို သမဂ္ဂခွပ်ဒေါင်းအလံတော်အဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ခြင်းကို ၁၉၈၈ခုနှစ်မှ ယနေ့ အထိ ကန့် ကွက်နေမည်ဖြစ်သည်။
၇။ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်ရေးကို ၀င်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေကြသော ပါတီများအနေဖြင့်လည်း သမဂ္ဂခွပ်ဒေါင်းအလံတော်နှင့် ပါတီရောယှက်သင့်ကောင်းသောအရာ ဟုတ်၊မဟုတ် ဆိုသည် ကို ပိုင်းခြားလုပ်ကိုင်သင့်သည်။
Rubbish idea. No one is ownership of this flag.
29 December 2011 at 04:56
Are you all interested in National Reconciliation or just argue for the sake of arguments. The country has suffered enough for this type of opinions and we should stand by our leader (Daw Suu). Did the person who post this matter consider to be leader of our student? We accept Daw Suu as our leader and these so called student group do not represent general public of Myanmar.
29 December 2011 at 05:38
saut thone ma kya te' kaung ka kant kwat nay thay tal. min lo kaung ka country ko bar kaung kyo pyu lo lal. ad flag ka min mother lin paing lo lar.
29 December 2011 at 08:08
29 December 2011 at 08:10
29 December 2011 at 09:25
sit aung or whoever,
mfc u kfk u cfu c k kfc u mfu c k c k uff u c kfc ufu c k m o c k u ter m_fu c k.......r
honestly, sorry for my not good English.
my comment meaning is....
If Sit Aung or whoever say like that, you guys are m _ t _er f_c_e r s only.
ဒေါ်စုကို လေးစားပါတယ်၊ ချစ်ပါတယ်၊ NLD ကိုလေးစားပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက် အားကိုး ပါတယ်၊ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းသား
သို့မဟုတ် မည်သည့်ပါတီ နှင့်မျှ
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်ဆိုရင်လဲ ကျောင်းသား အလံတော်ကို သုံခွင့်မရှိတော့ပါ၊ ထို့အတူစစ်တပ်လဲဒီလိုဘဲကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။
Democratic System ဟာအလုံးဆုံ ကောင်းပါသည်ဟု မဆိုလိုပါ၊ ဒါပေမဲ့
ဒီထက်ကောင်းမွန် ပြီးတရားမျှတပါတယ်ဆိုတဲ့ System မရှိ့သေးပါဘူး။
So what do you like to do? IDIOT